I-HMD Global ibhengeza ukumiliselwa kwe-Okthobha 11 e-India | I-Androidsis
Emva kwengqikelelo yezixhobo ezitsha zakwaNokia eziza kuthi thaca, kunye nesimemo sakutshanje sokuba inkampani i-HMD Global ithumele umsitho oza kubakho nge-11 ka-Okthobha e-India, kuninzi esele kuthethiwe malunga INokia 7.1 kunye ne7.1 Plus, iimfowuni ezimbini eziza kuba ziifowuni eziza kuqaliswa kweli lizwe.
Nangona kunjalo, yonke into ihleli ilindelekile, kuba inkcazo yezimemo ayichazanga nto malunga noko isilungiselele kona. Ngaphandle koko, Kuya kuba ngumdla kwaye kunokwenzeka ukuba esinye isiphelo sendlela singabhengezwa ngaloo mini. Yintoni esinokuyilindela?
Kukho amarhe okuba INokia 7.1 Plus inomboniso ongafakwanga, kunye neetheminali ezininzi kuthotho. Kwelinye icala, iNokia 7.1 kulindeleke ukuba ize nescreen esiqhelekileyo, ngaphandle kwenotshi kuyilo lwayo.
Amarhe ukwacebisa ukuba INokia 7.1 inokuba nescreen esine-intshi ezi-6, eya kubonelela ngefomathi yokubonisa eyi-18: 9. Ngapha koko, kucingelwa ukuba inikwe amandla yiprosesa yeQualcomm's Snapdragon 710 processor kunye ne-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, INokia 7.1 Plus iya kunikwa amandla yi-710nm Snapdragon 12 chipset., nangona ine-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina kwangaphakathi. Sikwalindele ukuba iscreen esikhudlwana kunye nebhetri ephezulu yomthamo wokwahluka okungaphezulu.
Ngokufanayo, Zombini ii-smartphones ziya kuba yinxalenye yenkqubo kaGoogle kaGoogle Kwaye ke kukho ithuba lokuba baqhubeke ngenkqubo yokusebenza yePie ye-Android 9.0.
Siza kufumana ulwazi ngakumbi malunga nezixhobo zombini xa sele zikhutshiwe. 4 ngo-Oktobha. Ngolwazi olunxulumene nezixhobo kwimakethi yaseIndiya, kuya kufuneka silinde kude kube ngu-Okthobha 11. Ewe kunjalo, kuya kuba njalo ukuba izixhobo ezifanayo ziya kuziswa. Akukho nto ikhuselekile, ke kufuneka ulinde.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-HMD Global ibhengeza umsitho wokumiliselwa kwe-11 ka-Okthobha